Isamsung iqala imveliso ngobuninzi beemodyuli ze-RAM ze-12GB | I-Androidsis
Kungekudala, siqale ukubona iimodyuli ze-RAM ze-12GB kwiifowuni eziphathwayo, kwi2018, njengakwi ILenovo Z5 Pro GT, eyokuqala enobungakanani obunjalo, kwaye iSamsung ibonakala ngathi ayizimiselanga kuchitha ixesha ngemveliso yayo.
Isigebenga saseMzantsi Korea saqala ukuvelisa ubunzima Iimodyuli ezili-4 ze-LPDDR12X DRAM yenzelwe ezona smartphones zibalaseleyo kunye nezixhobo eziphambili kunye neetekhnoloji.
Iimodyuli ze-Samsung ze-12GB ze-RAM zibonisa ukuphuculwa okuninzi
Iimodyuli ezintsha zenzelwe ukuba zisetyenziswe kwizixhobo ezixhasa ezona teknoloji ziguqukayo kwicandelo elihambahambayo, ezinje ngocwangciso lwekhamera kunye neenzwa ezahlukeneyo, uqhagamshelo lwe5G, ubukrelekrele bokufakelwa nokunye. Iimodyuli zakhiwe nge-10 nm (1y-nm) inkqubo yokuvelisa kunye iya kuba nesantya sokudlulisa idatha ukuya kuthi ga kwi-34.1 GB / s.
Olunye uncedo lweemodyuli ezili-4 ze-GB ze-LPDDR12X ze-RAM ezisandula ukungena kwimveliso yobuninzi yile ukusetyenziswa kwamandla okuphantsi: ziya kusebenza ngakumbi. Isamsung yanciphisa ukutyeba kweemodyuli zayo: ezitsha ziyi-1.1 mm ubukhulu kwaye oku konga indawo yokubonelela ngeebhetri ezinkulu kunye noyilo olungcono lweefowuni eziphambili.
Isamsung sele isebenza "ngokugqibeleleyo kuyo yonke ikhusi" kunye nekhamera yeeselfies phantsi kwesikrini
Enkosi kwiimodyuli ezintsha, Abasebenzisi baya kuxhamla ekusebenzeni okungcono kwimisebenzi emininzi kunye nempendulo yokukhangela ngokukhawuleza. Ngaphambi koku, iSamsung nayo yaqala ukuvelisa kakhulu ukugcinwa kwe-eUFS 3.0 ngamandla ukuya kuthi ga kwi-512GB, nolunye uvuselelo olukhulu kwicandelo elihamba neselfowuni kwaye limele ukuphucula ngakumbi ukusebenza.
Iimodyuli ezili-4 ze-GB ze-LPDDR12X ze-RAM ziyilelwe ngokudityaniswa kweetshipsi ze-4 gigabit LPDDR16X kwiyunithi enye. Ukongeza kwimveliso enkulu yezi zinto, iSamsung iya kwandisa ukubonelelwa kwezi zinto kunye neemodyuli ze4GB LPDDR8X DRAM nge-300% kwisiqingatha sesibini se2019 kuba sele uqikelela imfuno enamandla yezi chips.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Isamsung iqala ukuveliswa kwemveliso yeemodyuli ezili-12GB zeefowuni
Ungayiseta njani ifowuni ye-Android yabangaboni kakuhle